अन्तत: राजु परियारलाई हात जोर्दै भने भाइरल कमला घिमिरे नानीसंग मैले हारे, दैविक शक्ति भएको खुलासा….(हेर्नुहोस् भिडियो) « Online Tv Nepal
अन्तत: राजु परियारलाई हात जोर्दै भने भाइरल कमला घिमिरे नानीसंग मैले हारे, दैविक शक्ति भएको खुलासा….(हेर्नुहोस् भिडियो)
Published :7September, 2019 7:18 pm
२१ भदौ, काठमाडौं – ११ बर्षीय बालिका कमला घिमिरेले गाएको लाइभ दोहोरी अहिले युटुबमा अत्याधिक भाइरल भएको छ। मै हु भन्ने गायक गायिकालाई समेत पछाडी पार्दै लाइभ दोहोरी गएकी छिन् ११ बर्षीय बालिका कमला घिमिरेले । शिशिर भण्डारी र अमृत सापकोटालाइ समेत पछाडी पार्दै कमलाले आफ्नो दोहोरीमा कब्जा गरेकी हुन। सुन्दा धेरैलाई लाग्छ अचम्म यति धेरै कला कहाँ बाट आयो यति सानै उमेरमा भने प्रश्न सबैको मनमा उठेको छ अहिले । कमलाको लाइभ दोहोरीले सबैको मन तानेको छ ।
पछिल्लो समय युटुब देखि समाजिक् संजाल सबैतिर भाइरल भएकी ११ बर्षीय बालिका कमला घिमिरे अन्तत इन्द्रेणीमा आएकी छिन। कृष्ण कंडेलले संचालन गर्ने इन्द्रेणीमा अहिले लाइभ दोहोरी गाउदै छिन् । उनको ठुलो चाहना थियो इन्द्रेणी सम्म पुग्ने उक्त चाहना आज पुरा भएको छ । ११ बर्षीय बालिका कमला घिमिरेले चर्चित गायक राजु परियारलाई पनि लाइभ दोहोरीमा हराएकी हुन् ! हेर्नुहोस् राजु परियार र ११ बर्षीय बालिका कमला घिमिरेको लाइभ दोहोरी । अन्तत: राजु परियारलाई हात जोर्दै भने भाइरल कमला घिमिरे नानीसंग मैले हारे, दैविक शक्ति भएको खुलासा….हेर्नुहोस् भिडियो….